Maamulka shirkadda Golis oo kulan la qaatay saamileyda shirkadda | Golis Telecom Somalia
Maamulka shirkadda Golis oo kulan la qaatay saamileyda shirkadda
Kulan balaadhan oo lagu qabtay hotelka International Village ayaa waxaa isugu yimi maamulka shirkadda Golis iyo saamileyda shirkadda Golis waxana muhiimadiisu ahayd in labada dhinac ay iska xogwaraystaan halka ay marayaan hawlaha shirkadda iyo sidii loosii horumarin lahaa.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ahaa maareeyaha guud ee shirkadda Golis Siciid Aadan Axmed, madaxa hawlgaladda C/laahi Cali Cumar, madaxa waaxda xiriirka dadwaynaha Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur, hogaanka ganacsiga Cumar Ciise Maxamed, Hogaanka gobalada C/risaaq Aw Cali.
Madasha waxaa kalmado ku aadan heerka ay marayso shirkadda iyo halka ay higsanayso kasoo jeediyay maamulka shirkadda waxana ugu horayn hadalka qaatay Maareeyaha shirkadda Siciid Aadan Axmed isagoo kalmadiisa ku bilaabay in shirkaddu sanadkii lasoo dhaafay ee 2014 ay u qabsoomeen waxyaabo badan.
“Sanadkii tagay shirkadda waxaa u hirgalay waxyaabo muhiim ah hadii ay ahaan lahayd dhanka horumarka iyo hadii ay ahaan lahayd dhanka waxsoosaarka iyo dakhliga, waxa kale oo aan idiinku yeernay idinkuna dhankiina aad doorkiina qaadataan gacan ka gaysataan sidii loosii xoojin lahaa horumarka shirkadda maadaama ay shirkaddu tahay shirkadiini ” ayuu yiri Maareeye Siciid Adan oo la hadlaya saamileyda.
Hogaanka ganacisiga shirkadda Golis Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq) ayaa isaguna sheegay in adeegyadda muhiimka ah ee shirkadda ay yihiin kuwa dhaliyay guulaha shirkadda isagoo xusay inay jiraan in lagu dhawaaqi doono adeegyo kale oo bulshadu la dhici doonto sida adeega xawaaladda ee Taaj oo macmiilka isagoo isticmaalaya moobeelkiisa lacagta looga soo xawili karo daafaha caalamka.
Madaxa waaxda xiriirka dadwaynaha Golis Shiekh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur ayaa dhankiisa ku booriyay saamileyda inaysan hagran dadaal walba oo ay uga qayb qaadan karaan horusocodka shirkadda uguna baaqay in had iyo jeer ay lasoo xiriiraan shirkadda.
Dhinaca kale waxaa iyaguna kalmado kajeediyay madasha qaar kamid ah saamileyda kuwaas oo uga mahadceliyay maamulka shirkadda sida hagar la’aaneed ee ay mar walba ugu taaganyihiin habsami socodka shirkadda.